'चिया पिउन आउँछु' भन्दै प्रचण्ड पुगे देउवा निवास, के छलफल भयो ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more 'चिया पिउन आउँछु' भन्दै प्रचण्ड पुगे देउवा निवास, के छलफल भयो ?
‘चिया पिउन आउँछु’ भन्दै प्रचण्ड पुगे देउवा निवास, के छलफल भयो ?
मंसिर २० गते, २०७६ - १०:१६
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न उनकै निवास बूढानीलकण्ठ पुगेका छन् । बुधबार साँझ दाहालले देउवालाई फोन गरे – म तपाईं कहाँ भोलि बिहान चिया खान आउन खोजेको छु । देउवाले पनि दाहाललाई सहजै स्वागत गर्दै भने, ‘आउनुहोस्, सँगै बसेर चिया पिउँला ।’ बुधबार साँझको संवादपछि बिहीबार बिहान धनगढी जानअघि दाहाल बूढानीलकण्ठ पुगे ।
बिहान सवा नौ बजेतिर बूढानीलकण्ठ पुगेका दाहाल र देउवाबीच झण्डै आधा घण्टा छलफल भयो । छलफलमा काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक पनि सहभागी थिए । १२ असारमा ललितपुरको कुपन्डोलस्थित होटल समिटमा बेलुकी काँग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको पहलमा दाहाल र देउवाबीचमा एक्ला एक्लै गोप्य भेटवार्ता भएको थियो ।
त्यसयता यी दुई नेताबीच छुट्टाछुट्टै भेटघाट भएको थिएन । नेता लेखेकले बिहीबार बिहानको भेट सत्ता र प्रतिपक्षका नेताबीच सामान्य शिष्टाचार निर्माणका लागि भएको बताए ।अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।
मंसिर २० गते, २०७६ - १०:१६ मा प्रकाशित
उपत्यकामा मात्रै ९३४ जनामा कोरोना, देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या २० हजार ३९६ पुग्यो
काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर १५१३ संक्रमित थपिएका छन् । मंगलबारको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वास्थ्य...
२४ घण्टामा थप १५१३ जनामा कोरोना, संक्रमित हुनेको संख्या ७६ हजार नाघ्यो
काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टाको अवधिमा थप १ हजार ५१३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ।यीसहित हालसम्म...
उपत्यकामा भीडभाड बढ्न थालेपछि जोरबिजोर प्रणालीमा थप कडाई, ११ सय सवारी कारवाहीमा
काठमाडौं । कोभिड–१९ को जोखिमकाबीच काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी तथा मानवीय चाप बढ्न थालेको छ । सवारीसाधान...
कास्की । लगानीका हिसाबले मेलम्ची पछिको देशकै दोस्रो ठूलो पोखरा खानेपानी सुधार आयोजनाको काम पुनः शुरु...
सर्लाही । जिल्लामा गैरकानूनी रुपमा सञ्चालनमा आएका क्रसर उद्योग अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएका छन्...
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे ओली -प्रचण्डबीच आज पनि छलफल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच...
वाशिङ्टन । सन् २०२० मा चीनको अर्थतन्त्र २.० प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण विश्व वैंकले सोमबार गरेको छ...
दलितमाथि भएको भेदभावका घटनामाथि सरकारले कारवाही नगर्दा यस्ता घटना दोहोरिँयो
काठमाडौं । नेपाल दलितमुक्ति सङ्गठनले सम्झना विकको बलात्कारपछि निर्मम हत्या भएको घटनाका दोषी पत्तालगाई...
आज फेरि ह्वात्तै बढ्यो सुनको भाउ, तोलामा कति पुग्यो ?
काठमाडौं । मंगलबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढेको छ । सोमबार छापावाल सुन तोलामा ९३ हजार ३०० रुपैयाँमा...
मटर तस्करीको ट्रान्जिट प्वाइन्ट बन्दै महोत्तरी, दैनिक सयौँ क्विन्टल मटर चोरी निकासी
महोत्तरी । महोत्तरी जिल्ला विगत केही दिनदेखि नेपालबाट भारततर्फ मटर तस्करीको ट्रान्जिट प्वाइन्ट बन्दै...
विधालयमा भीडभाड कम गर्न विद्यार्थीको रोल नम्बरमा जोरबिजोर प्रणाली
किसानलाई कात्तिके बाली भित्र्याउने भ्याइनभ्याई
कोरोना रोकथाम र उपचारमा चन्द्रागिरि नगरपालिकाको दुई करोड २७ लाख खर्च
घाटीबगर-छाङरु बाटो खुल्यो
५ लिटर रक्सी, १० लिटर जाँड बनाउन दिनू : सर्वोच्च
महानगरीय प्रहरी अब संघीय राजधानी प्रहरी
दसैं होइन, दशा टार्न मुग्लान जानेको ताँती
एसिड आक्रमणकारीमाथि अब कठोर सजाय, राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी
ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निणर्य यथावत् राख्न सर्वोच्चको आदेश
माछापोखरीमा डुबेर १३ वर्षीया बालिकाको मृत्यु
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा तेजाबलगायत तीन अध्यादेश जारी
भरतपुर अस्पतालमा कोरोना सङ्क्रमित बिरामी घट्दै गए
क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी हुँदा व्यवस्थापन गर्न समस्या